I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Craveggia, Val Vigezzo - I-Airbnb
I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Craveggia, Val Vigezzo
Craveggia, Piemonte, i-Italy
Ngokungangabazeki iCraveggia iyidolobhana elihle kakhulu eVal Vigezzo, elinoshimula nophahla olukhangayo. Leli fulethi lingaphakathi kwenye yendlu yakudala nenhle kakhulu yaleli dolobhana futhi lenziwa lesimanje eminyakeni embalwa edlule. Ilungele umuntu oyedwa noma izithandani ezidinga indawo enokuthula!
Ifulethi elincane liqukethe igumbi lokugezela, igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili kanye nekhishi / indawo yokuhlala. Kunezindawo zokupaka mahhala ezindaweni ezizungezile. Qaphela ukuthi ukufika endlini kuyadingeka ukuhamba cishe amamitha angama-50 futhi kunokwenza izitebhisi ezithile (cishe eziyi-10 sezizonke). Ngenxa yalesi sizathu ayibafanele abasebenzisi bezihlalo ezinamasondo.
Eduze nefulethi kukhona umzila wezintaba oholela "e-Alpe Fontana" nase "Colma di Craveggia", izindawo ezimbili zemvelo ezinhle lapho ungabuka khona i-Val Vigezzo yonke kanye neziqongo zalesi sigodi esihle. Ngaphezu kwalokho, ngemizuzu embalwa ngemoto, ungafinyelela amadolobhana aseToceno, eSanta Maria Maggiore naseMalesco. Ukufinyelela kulawa madolobhana ngezinyawo kungase kuthathe isikhathi esengeziwe, isibonelo ukusuka e-Craveggia ukuya e-Santa Maria Maggiore kungase kube ihora eli-1.
Angihlali esigodini esisodwa kodwa ngisemizuzwini engu-5 ngemoto ngisuka endlini ukuze ngithole zonke izidingo. Kungenzeka ukuthi ungithinte ngocingo noma nge-Whats-app